Mibilaogy ny fifidianana any Kenya ny gazety malaza any · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2007 16:25 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Nanokatra sehatra vaovao, amin’ny aterineto, hisahana manokana ny momba ny fifidianana atao any aminy ny gazety lehibe indrindra misy any Kenya Daily Nation. Sehatra mivoatra ka ny zava-dehibe malaza mitranga, ny lahatsoratry ny mpibilaogy ary ny lohateny sy fehitsoratry ny haino aman-jery no ho hita ao. Asaina hilaza ny heviny ao kosa ny olom-pirenena ary raha misy sary mety hahaliana ny maro eo amin’ny sehatry ny politika dia azo apetraka ao ihany koa izany. Ny blaogy moa dia saiky avy amin’ireo Oloben’ny firenena tahaka an’i Chares Onyango Obbo mpiandraikitra ny filankevitry ny haino aman-jery sy ny vokatra vaovao. Tao amin’ny toraka blaogy iray ny lehilahy dia nanaika fa vita hatreo ny amin’ny KANU antoko politika nitondra teo aloha. Nolazainy fa :
Kanu has all but become a shell that cannot field a presidential within just one electoral cycle of losing power. And without a presidential candidate, which would have allowed the party to build a national machine and craft a centralised election strategy, it will be a miracle if it can field even half the number of Parliamentary candidates it did in 2002…there is also something of Shakespearean retribution in (former President) Moi who led Kenya through its worst period, suffering the humiliation of burying Kanu half-alive by giving up on it as a viable enough organisation to field, let alone win, a presidential candidate
Teo ampelatanan’ny Kanu avokoa ny zavatra rehetra nefa tsy ho afa-miatrika fifidianana ho filoham-pirenena akory. Ka raha tsy manana kandida harotsaka ho filoham-pirenena akory ry zareo, fifidianana ahafahana mamory ny heriny rehetra manerana ny firenena sy mametrapetraka ny teti-panorona, dia hahagaga ihany raha hahazo ny atsasaky ny mpikambana ao amin’ny Parlemanta azony tamin’ny 2002 ny Kanu. Tahaka ny misy karazam-balifatin’ny (filoha teo aloha) Moi, izay nitondra an’i Kenya tamin’ny fotoana mangidy indrindra, raha tsy misy afa-tsy ny atsasaky ny mpikambana amin’ny Kanu sisa no antenaina handresena (amin'ny parlemanta).
Ny gazety faharoa amin’ny fielezana any Kenya, The Standard, kosa dia nanokana takelaka ho amin’ny fifidianana izay azo ifanakalozana ihany aloha hatramin’izao.
Hotanterahina amin’ny volana desambra 2007 ho avy izao moa ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ny Antenimiera any Kenya.